Vokatry ny fakan-tsary masiaka amin'ny vatana amin'ny mpiambina fiarovana | Vahaolana OMG
Vokatry ny fakan-tsary masiaka amin'ny vatana amin'ny mpiambina
Amin'ny andro tsirairay mandalo dia mihamitombo ny mponina eto amin'izao tontolo izao. Izy io koa dia manome fiakarana haingana amin'ny teknolojia sy siansa. Androany dia afaka mahita zavaboary mahafinaritra be dia be isika eo akaikintsika. Manamora ny fiainantsika ireo zavatra noforonina ireo. Miampy ny fitomboan'ny mponina ao amin'ny tanàn-dehibe iray dia azo antoka fa mitombo be ny tahan'ny heloka bevava. Tsy maintsy miatrika olana isan'andro ny Polisy ao amin'ny tanàna. Manampy anay ny siansa, satria nanampy anay hanome fakantsary Worn Body.
Vokatry ny fakan-tsary masiaka amin'ny vatana amin'ny polisy
Body Worn cameras dia manome fanampiana lehibe amin'ny fiainana andavanandron'ny polisy. Raha mahita mazava isika dia afaka mahazo tombony betsaka amin'ity vokatra ity. Body Worn cameras dia manome fanampiana lehibe amin'ny fiainana andavanandron'ny polisy. Manjary toy ny maso fahatelo amin'ny fomba iray izany amin'ny fampitomboana ny fahatsapan'ny olona tsirairay. Azo ambara izany satria indraindray ny olona iray dia tsy mahatsikaritra antsipirihany momba ny masony manodidina azy. Saingy miaraka amin'ny fakantsary dia afaka mahita izy averimberina hanamorana azy hanondro ny antsipiriany kely. Noho izany, afaka milaza isika fa miteraka voka-dratsy eo amin'ny polisy.
Afaka mampiasa fakantsary volon-doha ve ny mpiambina?
Ny fakantsary raikitra amin'ny vatana dia azo ampiasaina amin'ny tanjona maro. Araky ny efa noresahina teo aloha dia misy tombony betsaka. Izy io dia manenjana ny fahatakarana ny maso raha manome maso fanampiny amin'ny fomba iray. Afaka manampy ny mpiambina amin'ny fomba maro ny horonantsary voarakitra an-tsoratra fa raha miteny amin'ny ankapobeny isika dia afaka mahita fa tsy mitovy amin'ny manampahefana mpitandro ny filaminana ny fampiasana ireo fakan-tsary mitafy vatana amin'ny mpiambina.
Na izany aza, tsy misy fitsipika manokana mandrara ny mpiambina tsy hampiasa fakantsary raikitra amin'ny vatana. Ny orinasa dia afaka mameno ny mpiambina azy amin'ny fakan-tsary mitafy vatana. Hisy anefa ny fatiantoka sasany raha misy mpiambina.
Inona no mahasamihafa ny tranga misy amin'ny mpiambina?
Araka ny hitantsika fa ny mpiambina dia manana tanjona samihafa raha oharina amin'ireo manamboninahitra polisy. Tsy mila mandeha any an-toeran-kafa izy ireo. Ary koa, tsy mandeha na aiza na aiza izy ireo hanaovana fanadihadiana. Noho izany, ny fakantsary raikitra vatana dia somary mifanentana kokoa amin'ny fampiasan'ny polisy fa tsy mpiambina. Saingy raha sendra sendra ny fihaonana amin'ny mpanao herisetra na mpangalatra ny mpiambina, dia ny fakantsary raikitra vatana no hanome ny vokatra tsara indrindra amin'ny alàlan'ny fandraisam-peo azy ireo. Saingy tsy hita tao amin'ny orinasa maro ny fironana mampita mpiambina amin'ny fakan-tsary mitafy vatana.
Maninona ny ankamaroan'ny orinasa no tsy nampiasa fantsom-paty vatana tamin'ny mpiambina azy:
Izahay dia tsy nahita ny ankamaroan'ny orinasa nampitambatra ny mpiambina azy amin'ny fakantsary raikitra vatana. Misy antony fototra mahatonga an'izany. Andao hojerentsika ny azy:
Ny olana lehibe ateraky ny ankamaroan'ny orinasa tsy afaka mampita ny mpiambina azy ireo amin'ny fakan-tsary efa tonta dia ny vidiny lafo amin'ireo fakantsary ireo. Miaraka amin'ny haitao vao misondrotra, ny vidin'ny fampitaovana ny mpitandro ny filaminana miaraka amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana dia lasa mora vidy kokoa nefa tsy misy dikany. Ny setan'ny fakantsary mitafy vatana tokana dia mety ho lafo be eny an-tsena. Manodidina ny $ 700- $ 800 ny vidiny. Fa maninona no ilaina ny mividy kamerà lafo vidy ho an'ireo mpiambina azy ireo? Miatrika olana mitovy amin'izany ihany koa ny sampan'ny polisy.
Lehibe ny departemanta polisan'ny firenena izay mila fakantsary marobe ho an'ny manamboninahitra. Izahay dia maminavina fa ny fakantsary tsirairay ho an'ny manamboninahitra dia mandany $ 800 izay enta-mavesatra ho an'ny departemanta. Noho izany, maharikoriko be dia be ny fampiasana fakantsary mandeha amin'ny vatana.
Ny antony iray hafa tsy ahafahan'ny orinasa mividy fakantsary vita amin'ny vatana ho an'ny mpiambina azy dia ny filana izany. Araka ny efa noresahina teo aloha dia tsy misy filàna fakan-tsary mifono vatana ao anaty adidy mpiambina. Na dia misy fiantraikany amin'ny fampandehanana ny mpiambina aza tsy araka ny fiantraikany amin'ny mpiasan'ny polisy. Noho izany, ny orinasa dia tsy mahatsapa ny filàna mividy fakantsary vita amin'ny vatana ho an'ny mpiambina azy.
Miharihary fa ny fipoahan'ny teknolojia vaovao sy ny tambajotra sosialy dia nanova ny fomba fiheveran'ny olona ny fiainany manokana, fa ny fakana sary nataon'ny fakan-tsary mihetsika amin'ny fantsom-batana dia mety mamela ny fampiasana ny teknolojia fankatoavana ny tarehy.
Ny fampiasana ny Kamera Worn Body dia manome mpiambina ny firaketana an-tsoratra momba ny toe-javatra mampihetsi-po, fa koa amin'ny firaketana ireo endrik'ireo olona mandalo izay mety ho ratsy amin'ny fiainana manokana. Mikasika izay dia nisy ny masoivoho mpamoaka lalàna sasany nandray andraikitra ary nanambara izany hanohitra ny fiainana manokan'ny olona. Izany dia vokatr'izany dia tsy tsara ho an'ny orinasa.
Tsy ampy ny manome fakantsary vatana fotsiny amin'ny manampahefana iray ary milaza amin'ny manamboninahitra hoe mivoaka sy mampiasa azy. Ny politika momba ny fampiasana ireo fakantsary (raha tokony hatao na hamonoana ny fakan-tsary, rehefa hampahafantarina ny olona fa voarakitra, ahoana ny fampidinana ny angon-drakitra, sns) dia tokony hatsangana ary ny mpiandraikitra dia tokony hofanina amin'ny politika.
Ny fakantsary raikitra vatana dia azo ampiasaina hanaraha-maso ny fihetsiky ny mpiambina. Mampandeha tsara ny mpiambina io. Rehefa mahalala fa voarakitra ny zava-drehetra, dia tsy ho maika hiady amin'ny hafa izy. Mandritra izany fotoana izany, ilay olona niresaka tamin ilay mpiambina dia hanandrana hanana fihetsika tsara sy fifehezana tsara ihany koa raha ny azy dia voarakitra. Noho izany, ny orinasa dia afaka mampiasa ireto fakantsary ireto mba hanaraha-maso ny mpiambina azy.
Vokatry ny fakan-tsary masiaka amin'ny vatana amin'ny mpiambina no farany niova: Septambra 26th, 2019 by Admin